Hair – Yay Thu Ma
Hair & Nails / Hair Tutorials / News Brief
သင့်ရဲ့ ဆံကေ သာကိုပျက်စီးစေသော သင်နေ့စဉ်ပြုမူနေသည့်အပြုအမူများ
နေ့စဉ် သင်ပြုမူနေကျ အပြုအမူအချို့ဟာ သင့်ရဲ့ ဆံကေ သာကို ပျက်စီးစေလေ့ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ပျိုမေ အများစုဟာ ဘယ်လိုအပြုအမူတွေက သူတို့ရဲ့ဆံကေသာကို ပျက်စီးစေလဲ မသိကြပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဆံကေသာ ကိုပျက်စီးစေတဲ့ အပြုအမူများကို သတိမပြုမိပဲ ဆက်လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ရေရှည်မှာ ဆံကေသာတွေ ပိုမိုပျက်စီးလာပါတော့တယ်။ ဆံကေသာဟာ မိန်းကလေးတို့အတွက် အလှတစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှအပဟာ ဆံကေသာပေါ်မူတည်ပြီး အများကြီးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ဆံကေသာကို...
ရှူး… တိုးတိုး !! ဒီမှာ မင်းဆံနွယ်တွေ သိပ်လှသွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် !!
ရူပါလေးထင်းလင်းလှပနေဖို့ ဆံကေသာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ထက်ဝက် အရေးပါနေတယ်ဆိုတာဟာ ဒီနေ့ခေတ်အတွက် လျှို့ဝှက်ချက် မဟုတ်တော့ပေမဲ့ ဒီသော့ချက်ကို ထိထိမိမိ ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းတွေကတော့ လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလို လှပခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့များ ဖွင့်လှစ်နိုင်မလဲ…။ ရှေးယခင် အဆက်ဆက်ကတည်းက ဆံကေသာ ပိုမိုလှပကောင်းမွန်စေဖို့ရာ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်နည်းများစွာရှိတဲ့အနက် ယနေ့နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်စားလာတဲ့ နည်းလမ်းကတော့ Hair Spa ပြုလုပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Hair Spa ပြုလုပ်ခြင်းဟာ ဆံကေသာကို...
ဆံပင်ကို တင်းတင်းမချည်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း
ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန် သို့မဟုတ် ဆံပင်တွေ ပွလန်ကြဲနေတဲ့ နေ့တွေမှာ ခေါင်းစည်းကြိုးတွေက အကောင်းဆုံးအဖော် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းစည်းကြိုးတွေဟာ သင့်အတွက် သိပ်တော့မကောင်းပါဘူး။ တကယ်လို့ သုံးမယ်ဆိုရင် မတင်းမရင်း ဖဲကြိုးခေါင်းစည်းကြိုးတွေ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းစည်းကြိုးအပျော့လေးတွေ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆံပင်စည်းကြိုးတွေ လုံးဝမသုံးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေက… ဆံပင်စုချည်တာ အကြံအဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုလို့ ထင်ရပေမယ့် ဒီလိုလုပ်ခြင်းက ဆံပင်တွေ ဖိအားပိုရစေပါတယ်။ တင်းရင်းတဲ့ ခေါင်းစည်းကြိုးတွေက ပိုတောင်ဆိုးပါတယ်။ မွှေးညင်းပေါက်တွေ ပျက်စီးစေပြီး ဆံပင်တွေကျွတ်စေကာ...
အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အမျိုးသားတွေအကြား စကားများ ရန်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ ဆံပင်ပုံစံကြောင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ကမိန်းကလေးတွေကို ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှိစေချင်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ ဆံပင်တိုတိုနဲ့သာ ရှိစေချင်ပါတယ်။ ရှည်နေတုန်းမှာ ချက်ချင်းညှပ်လိုက်လို့ရပေမယ့် တိုနေတုန်းမှာတော့ ဆံပင်တွေကို ချက်ခြင်းရှည်လာအောင် လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မြန်ဆံပင်ရှည်လာအောင်တော့ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဆံပင်မြန်မြန်ရှည်လာစေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း (၇ ခုရှိပါတယ်။ ၁။ ခေါင်းလျှော်ရည် ကောင်းကောင်းသုံးပါ။ ၂။ မကြာမကြာ ခေါင်းလျှော်ပေးပါ။ ၃။ ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါတိုင်း...